TALATAN’I VOLONONDRY : TOHIZANTSIKA NY LALANA HOY NY KANDIDA DR ROBINSON – MyDago.com aime Madagascar
Talatan’i Volonondry, Sabotsy Namehana, Ankadindratombo; izay samy ao anatin’ny faritra Avarandrano no nanohizan’ny kandida Dr Robinson ny fampielezankevitrany androany. Niara-dia taminy hatrany Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ireo delegasiona avy amin’ny movansy Ravalomanana sy ny antoko Avana. Talatan’i Volonondry no natomboka ny fampielezankevitra, izay tao amin’ny kianja fivarotan’omby any an-toerana. Vory lanona tamin’izany ireo mponina eny amin’ny manodidina izay maika hifanatrika amin’i Neny sy ny Dr Robinson. Nisy ny fandraisam-pitenenana nataon’ireo mpitarika tamin’izany. Ny Me Hanitra dia nilaza fa firahamiasa amin’ny Dr Robinson sy ny movansy Ravalomanana no ataontsika eto Isika hoy izy dia tsy maintsy mandray andraikitra amin’ny fampandaniana ny kandida favori. Ramatoa Lalao Ravalomanana kosa dia nanambara fa vahoaka hendry ianareo eto Talatan’i Volonondry ka ilaina ny firaisankina, ny fifankatiavana satria tomboantsoa iray ihany no iombonana. Entintsika ambavaka noho izany ny kandida favori Dr Robinson. Ny kandida Dr Robinson dia nanazava tamin’ny mponina fa androany izahay vao tonga eto satria vao omaly no nanomboka ny fampielezankevitra. Teny amin’ny Magro hoy izy no nanombohana izany satria tao no niainga ny fanarenana ity firenena itry kanefa tsy adino Avarandrano. Ankoatra izay dia nilaza ny fandaharan’asany ihany koa ny tenany, ka voalohany amin’izany ny famelana ary firaisankina dia ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana. Tohizana ny lalantsika hoy izy ary ataontsika mahita ranomasina ao anatin’ny andiny iray Talatan’i Volonondry, ka hanaovana « auto route » miainga ao Anjozorobe ka hatrany Vavatenina. Ny faharoa dia ny fanabeazana ka atao izay hampirindra azy. atao maimaimpoana ny fampianarana amin’ny amabarontonga voalohany, miaraka amini’zany ny kits scolaire. Ny fambolena sy fiompiana dia vitantsika eto ny mampiditra omby vavy be rorono. Ampiantsika ny tohondrano ahafana manao jiro. Ny fandriampahalemana dia asiana « poste avancé » maromaro izay ahitana miaramila mahomby eto. Noho izany dia tandremo hoy izy fa amin’ny 25 okotobra dia fidio Dr Robinson.
ANDRO VOALOHAN’NY PROPANGADIN’NY KANDIDA DR ROBINSON : FAHOMBIAZANA TANTERAKA
3 réflexions sur « TALATAN’I VOLONONDRY : TOHIZANTSIKA NY LALANA HOY NY KANDIDA DR ROBINSON »
26 septembre 2013 à 2 h 40 min
GASY AHO. FADIO NY MIFIDY KANDIDA FOZA ORANA = FRANTSAY = MPANJANAKA = MPAMPAHANTRA NY MALAGASY.
NY VOLAKELY ANAOVANA PAVES ELAKELAN-TRANO HANDREBIREBENA DIA TSY AMPAHAFIRIN NY HAREM BEN NY MALAGASY NANGALARINY SY MBOLA HANGALARINY AMIN NY ALALAN IREO KANDIDAN IREO (HAJO, EDGARD, CAMILLE VITAL, HERY RAJAOMAMPIANINA IZAY MPANGOROM BOLA TAO AMIN NY MINISTREA VOLA, LAHINIRIAKO, ROLLAND RATSIRAKA;…)
FOZA ORANA = KAPAO AMIN NY ALALAN NY FIFIDIANANA FA MANIMBA NY TANY
Ireo manapa-kevitra ny tsy hifidy na tsy hanao fifidianana , inona ary no hevitra mba hitany e! 4 taona izay , inona tsy efa natao fa tsy tafa foana isika , efa nisy fifidianana lalampanorenana fople teto, vitsy ny olona nandeha nifidy fa hampiarina izao ilay lalana , iza no hafaka hisakana ny fampiharana azy teo , tsy misy fa mitovy foana ilay fihetsika atao dia ny mimenomenona ihany fotsiny no vita e!ka amin’ity indray mitoraka ity , tsy misy miteny eo hoe fifidianana lafatra io, fa fomba iray io hazoana mampiseho fa maro an’isa ny momban’i Ravalomanana , fomba iray entinao mivoaka ny kianja ka mitety faritra fa mbola tsy maty ny tolona Ravalomanana ka hatonga ny olona hanana risimpo indray, fomba iray hazoana mandrefy ny tena herin-dRavalomanana raha mbola ao tsara , hita izao fa vao nahita fotsiny ny frantsay fa mbola betsaka ny mpanohana an-dRavalomanana dia efa alefa sahady ny tsaho fa mety hisy ny korontana, iza no hanakorontana? ny frantsay ihany no hanakarama olona hanakorontana eo , dia mody lazaina fa tsy nazaka ny voka-pifidianana ny pro Ravalo, dia ampiasaina indray aloha ny miaramila hamoritra mba hatonga ny olona hanaiky izay vokatra eo, efa fantatra daholo ilay paika , fa ny fomba entina manohitra ilay no tena tsy hita e! fa mila mitady hevitra isika
26 septembre 2013 à 16 h 42 min
Nankaiza daholo ny namana rehetra ? Mino sy manantena aho fa lasa nanao fampielezan-kevitra daholo !
Marina dia marina daholo ireo voalazanao ireo ! Ary mba miangavy an’ny rehetra : Izay mahasoa ataon’Andriamanitra hoy ny fitenenana, fa raha tsy mihetsika isika mianakavy dia hanjaka mandrak’izay ny fahavalo sy ny olon-dratsy, dia ireto foza izany !
Mitodika any amin’ireo mpitarika indray.
Mba miangavy re ry zareo rehefa manao fampielezan-kevitra ianareo, mba lazao amin’ny vahoaka aloha ny anton’izao krizy izao ê ! Mba tsy hiverenan’ilay resaka 4 L ihany koa, satria be loatra ireo marivo salosana sy ireo be fialonana tsy vonona hieritreritra momban’izay voalaza, aoka re mba tsy asiana fampanantenana be loatra ny resaka ê !
Ankaotry ny famerenana ny Filoha, dia ny famerenana ny ara-dalàna, ny fanajàn’ny rehetra ny Lalàna velona rehetra ary indrindra ny fandriampahalemana no tokony ho tanjona voalohany tratrarin-tsika !
Tonga ho azy izay rehetra tadiavin-tsika, rehefa tafapetraka ireo !
Izany « auto route » hahitàna ranomasina izany tsy dia maika raha momba an’iny faritra avaratra iny ! « Lalana vita tsara » hahafahan’ny vokatra avy any Ambatomanoina sy Sadabe miakatra, dia efa tena hahafaly ny rehetra ! Tsara mba ho hitanareo izany lalana izany rehefa tonga ny fahavaratra, ary efa miresaka an’izany ihany dia lasa dia lasa ny saina, satria lalana tsy azo andehanana mihintsy izany raha vao milatsaka ny orana amin’ny volana desambra !
Mila mailo amin’ny fifidianana !
Efa « naroson’ny Banque mondiale » ny tokony ho lazainareo amin’ny vahoaka mandritry ny fampielezan-kevitra !
Précédent Article précédent : ANDRO VOALOHAN’NY PROPANGADIN’NY KANDIDA DR ROBINSON : FAHOMBIAZANA TANTERAKA
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA